VIDEO+SAWIRO : Urur siyaasadeedka Horcad oo Shirweynihiisii Koowaad ku qabtay Boosaaso iyo Maamul rasmi ah oo Ururkaasi doortay.
Home»Somali News»VIDEO+SAWIRO : Urur siyaasadeedka Horcad oo Shirweynihiisii Koowaad ku qabtay Boosaaso iyo Maamul rasmi ah oo Ururkaasi doortay.
Facebook	Twitter	Thursday, February 21 2013	VIDEO+SAWIRO : Urur siyaasadeedka Horcad oo Shirweynihiisii Koowaad ku qabtay Boosaaso iyo Maamul rasmi ah oo Ururkaasi doortay.	Written by Admin
Comments (1)	Boosaaso ( SPR ) : Munaasabadani oo ahayd shirweynihii kowaad ee Urursiyaasadeedka Horumarka iyo cadaalada Puntland ee Horcad ayaa waxaa uu ka dhacay Hotel Panaroma ee Magaalada Boosaaso iyadoona ay kasoo qayb galeen Madaxda iyo xubnaha Ururka Horcad,Nabadoono,dhalinyaro iyo boqolaal dadweyna ah oo ka kala yimi gobolada kala duwan ee Puntland.
Ugu horayn Munaasabada ayaa laga akhriyay buug daabacan oo ka hadlaya Aas aaskiiUrur siyaasadeedka Horcad iyo Barnaamijka uu ka duulayo Ururku ee wax ka badalidasiyaasada,dhaqaalah,waxbarashada,warbaahinta iyo Arimaha cadaalada ee Puntland hadiiuu Ururku ku guulaysto doorashada Dimuqraadiga ah ee ka hirgashay Puntland.
Munaasabada ayaa waxaa intii ay socotay laga soo jeediyay tix suugaaneed lagu amaanayUrurka Hor cad iyo sidoo kale dar daaran ay ururka usoo jeediyeen Nabadoonada iyo kasoo qayb galayaashii kale ee munaasabadani.
Madaxda Ururka Horcad ayaa ka tacsiyeeyay geeridii Allaha u naxariistee Sheekh Cabdu qaadirNuur Faarax,iyadona sidoo kale ay cambeereeyeen dadkii ka dambeeyay dilkiisa.
Munaasabada Shirkii 1 aad ee Urursiyaasadeedka Hor cad ayaa golaha dhexe ee Ururkaasiwaxaa uu ku ansixiyay Xeerka Ururka,iyadoona sidoo kale ay ku doorteen Gudoomiyaha Ururka Horcad,ku xigeenkiisa iyo gudoomiyaha golaha dhexe ee Ururka.
Gudoomiyihii KMG ee Ururka Horcad,haatana ah gudoomiyaha golaha dhexe C/qaadir Axmed Ducaale.
C/qaadir Axmed Ducaale ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in Ururka Hor-cad uu ka baxo KMG,iyadoona si rasmi ah loo dhisay Maamulkiisa,Waxaana intii lagu guda jiray Xaflada Munaasabadii 1aad ee Shirwaynaha Ururka uu si aadah u cambaareeyay kuwii ka dambeeyay dilkii Allaha u naxariistee Sheekh C/qaadirNuur Faarax,iyadoona uu ka tacsiyeeyay geeridiisa.
Gudoomiyaha Ururka Horcad,ahna aasaasayaashii Ururka Cumar Ismaaciil Waabari Cumar Ismaaciil Waabari ayaa ku dheeraaday Aas aaskii Ururka iyo sababaha ay xooga usaareen dhalinyarada,iyadoona si weyn uu u maanay shacabka Puntlandee heerka Dimuqraadiyada ee ay marayaaan,waxaana uu meesha ka saaraydiidmay kasoo yeeraysa qaar kamid ah siyaasiyiinta ee hanaanka codkalagu kala baxayo,waxaana uu ugu yeeray in ay kasoo qayb galaan.
Gudoomiye ku xigeenka Ururka Horcad Sayid Cali Diiriye Nuur
Sayid Cali Nuur ayaa uga mahadceliyay bulshadii kasoo qayb gashay shirweynihiikowaad ee Ururka waxaanu uu sheegay in Ururku uu yahay mid dhamaan bulshadaufuran ayna kusoo dhoweynayaan gacmo furan.
Raysal Wasaare Saacid oo kulamo ku qaadanaya Kismaayo kadib tagitaankiisii Magaaladaas.
SAWIRO : Prof Jawaari oo lagu soo dhoweeyay Baydhabo iyo kulamo ka bilowday magaaladaasi.
SAWIRO : Wafdi uu hogaaminayo Wasiirka Arimaha gudaha dowlada Federaalka oo gaaray Kismaayo.
« Aabe uu ku dhacay cudurka Kansarka,lana xanuusanaa mudo 25 sano ah oo dalbanaya in la caawiyo.	Urursiyaasadeedka Midnimo oo walaac muujinaya iyo Maamulka Madaxweyne Faroole oo rajo wanaagsan qaba. »
AAD BAAN USOO DHAWAYNAYAA URURKA CADALADA IYO HURUMARKA HORCAD WAXALAGAFILAYAA CADAALAD IYO WANAAG GUUAYSO